Last nohavaozina: Mey. 14 2019 | 3 min namaky
Avy sitcoms ny pitiavana comedies ny tantara avy amin'ny namana, fantatsika rehetra ny sasany amin'ireo fahamarinana eran-niaiky ny hampiaraka. Na izany aza, araka ny siansa ny ankamaroan'ireo ireo “fahamarinana” dia tsy mety. Noho izany dia tena fantatry ny olon-tiany tsy nieritreritra ianao noho ianao nanao, mandrak'izao.
Hevi-diso #1: Gamers manirery virjiny.
Amin'ny alalan'ny Hollywood, fantatsika rehetra ny “nerdy gamer dia tsy nikasika ny boob” stereotype. More izany, rehefa mandre ny teny hoe gamer, Matetika isika mieritreritra ny tena manify na izay olon-tiany ny olona matavy dia ahitana Xbox Chats mitranga eo amin'ny ray aman-dreny ny ambany rihana. Araka ny siansa, gamers nerdy ireo dia azo inoana fa niala tamin'ny daty noho ny tsy gamers. Bebe Kokoa, ny fitomboan'ny lalao tsena ankoatra ny fiakaran'ny Multiplayer lalao, lalao dia tena lasa malaza mpandika ranomandry. Koa, aoka isika tsy hanadino ny lalao amin'ny aterineto ny olona izay efa nihaona sy lavo amin'ny fitiavana.
Hevi-diso #2: Online fiarahana dia tsy ala nenina farany ihany fa resy ihany no misarika.
Indrisy anefa fa, noho ny ezaka mafy barotra ankoatra ny untruthful mombamomba, mampiaraka efa azonay avy amin'ny aterineto ho ratsy ny rap nandritra ny taona maro. Matetika, ao an-tsaintsika izany mieritreritra mihitsy ny ho toy ny ezaka farany longoa amin 'ny fitadiavana ny fanahinareo vady; na izany aza, ireo no diso hevitra. Nisy fanadihadiana natao vao haingana izay nampiseho fa ny iray amin'ny dimy mampiaraka mpampiasa toerana mahita ny fanahiny vady an-tserasera. Koa, 94% ny olona izay mamorona ny fifandraisana an-tserasera dia niala tamin'ny daty faharoa, izay fomba mihoatra noho ny isan-jaton'ny olona izay mihaona ivelan'ny aterineto. Nahoana no? Satria fiarahana amin'ny aterineto dia amin'ny alalan'ny ordinatera, ny olona miezaka ny manao ny marina kokoa sy upfront tahaka izy ireo “miresaka amin'ny ordinatera”. Eritrereto izany, no spill ny tsinay ny olona iray vao nivory tao ny fisotroana? Antony lehibe iray hafa daty an-tserasera izany dia tena lasa hatrany Fanohanana sy malaza. Ny vintana fa ho hihaona olona izay manana ny tombontsoa mitovy Tena avo.
Hevi-diso #3: Amin'ny fifandraisana, pihetseham-po vehivavy sy ny lehilahy fa mitombina.
Isika rehetra efa nahita ny tsy hita isa ny filma sy tantara dia mampiseho fa ny vehivavy bursting an-dranomaso nandritra ny lehilahy na dissecting ny fifandraisana raha toa ny olona ho hadinony tanteraka sy suave raha handresy ny vehivavy foana ny fony. Siansa milaza fa ny olona no tratran'ny pihetseham-po kokoa ny fifandraisana tantara noho ny vehivavy, fotsiny izy ireo fa tsy mampiseho izany. Ny vehivavy amin'ny ankapobeny izay zary fifandraisana akaiky amin 'ny fianakaviana sy ny namana mamela ny fihetseham-po be dia be ny fanampiana indrindra raha ny amin'ny lehilahy olana. Ry zalahy fotsiny mazàna hamboraka ny namany nanao ny ady mafy indrindra teo izy ireo.
Hevi-diso #4: Ny vehivavy mamono olon-tiany.
Noho ny stereotype fa mpiaro ny zon'ny vehivavy dia tsy miankina vehivavy izay tsy mila ny fifandraisana, na ny olona mba hamitana azy ireo dia strung nandritra ny taranaka maro, raha ny marina dia tsy mety. Vehivavy izay mihevitra ny tenany ho mpiaro ny zon'ny vehivavy dia matetika noho ny tsy ao amin'ny heterosexual fifandraisana. Ireo lehilahy izay manambady vehivavy iray no nitatitra fa ny firaisana ara-nofo ny fiainana mahafa-po kokoa noho ireo izay tsy. Noho izany dia matetika mpiaro ny zon'ny vehivavy raha hita ho flannel, mannish vehivavy fa raha ny marina tsy ny raharaha.
Hevi-diso #5: Mpivady izay miara-miaina alohan'ny fanambadiana voaomana tsara kokoa.
Ny fiaraha-monina dia hafindra hiala amin'ny zava-misy iray tsy manam-bady fa nahazo toerana mpivady miara-miaina ao anatin'ny fahotana. Fa ankehitriny efa ho dikany izany. Toa mitombina ny hifindra any amin'ny hafa manan-danja alohan'ny fanoloran-tena ara-dalàna ny fanaovana izay mety hiafara amin'ny fisaraham-panambadiana. Atỳ, Afaka mijery raha Mr. Right tena Mr. Right. Araka ny siansa, ireo mpivady izay niaraka nipetraka alohan'ny fanambadiana, na manana andraikitra ambony ny tahan'ny fisaraham-panambadiana sy ny fahafaham-po ara-panambadiana ambany. Mpivady izay milalao trano alohan'ny indrindra andraikitra dia voaozona raha manao izany izy ireo mba hitsapana ny fifandraisany. Raha te mizaha toetra ny namanao ianao dia Mety ho tsy amin'ny marina iray. Lafin-javatra iray hafa izay mety hitranga eo tsehatra dia ny hevitra ny fandaminana. Mpivady, ankehitriny, mitondra miara-mipetraka toy ny dingana iray hafa eo amin'ny dingana mampiaraka. Raha vao manomboka miara-mipetraka, izy ireo mahita hoe saika tsy ho vita ny handrava-pihetseham-po toy ny ara-bola, ary nanorim-ponenana izy ireo.
Ary any no manana izany, ankehitriny fantatrao bebe kokoa momba ny olon-tiany.
Animal-Friendly fialam-boly ho an'ny Mpivady